အဝေးရောက် ……………………ချစ်သူ (gtalk ချစ်သူ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အဝေးရောက် ……………………ချစ်သူ (gtalk ချစ်သူ)
အဝေးရောက် ……………………ချစ်သူ (gtalk ချစ်သူ)
Posted by snow white on May 15, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
ချစ်ခဲ့တာဘယ်လောက်များကြာသေးလို့လည်း မင်းက လမ်းခွဲ စကားပြော ချင်နေင်္ပြီလားချစ်သူရာ…..သူများတွေအဆင်ပြေတာတွေ့ရင် ကိုယ်လည်းပျော်ရွှင်နေမိသူပါ သူများအတွဲတွေလိုမျိုးတို့တွေလည်း ပျော်ရွှင်စ၇ာနေ့ လေးဘယ်တော့များရရှိမလည်း ချစ်သူလေးရယ် အနေဝေးနေပေမယ့်လည်း တို့မင်းတယောက် ထဲဘဲချစ်မိသွားတာပါ တကယ်တမ်းဆို မင်းကကိုယ်လောက်ချစ်နိုင်ပါ့မလား မင်းကတို့ကိုမြင်ဖူးလို့လား တို့ကကောမင်းကိုတွေဖူးလို့လားမင်းကကောတို့မသံကြားဖူးလို့လား တို့ကလည်းမင်းအသံကိုကြားဖူးလို့လားမင်းအကြောင်းလည်းတိုမသိ မင်းချမ်းသာလား မင်းဆင်းရဲလားမင်းအသားဖြူလား မဲလားညိုလား ဆိုတာလည်ညး တို့တကယ်ကိုမသိခဲ့ တာမင်းလည်းတို့က်ို တကယ်ချစ်ခဲ့တယ် ဘဲထင်တာ တို့ကဘယ်အရာမှ အနိုင်မယူတက်သူပါ မင်းသာကိုယ့်နားကို အမြန်ဆုံးလာနိုင်မယ်ဆိုတို့အရမ်းပျော်မိမယ် ထင်တယ် အစကအချစ်ဆိုတာ တကယ်ကိုမသိခဲ့တာပါ အချစ်စစ်ဆိုတာ ပိုတောင် မသိခဲ့ဖူးဒါပေမယ့် မင်းကချစ်တက်အောင်လညလ်း သင်ပေးခဲ့ပါတယ် တကယ့်ကို မင်းရဲ့ယောင်္ကျားမာယာနဲ့ လှည့် ဖျားသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ် ဘာဘဲပြောပြော တို့ကံကောင်းပါတယ် မင်းလည်း တိုကိုတကယ်ချစ်တယ် ဆို တို့ဒီတသက်မကလို့နောင်တသက်လည်းဆက်ဆက်စောင့်နေပါ့မယ်
ခုမှစာတင်တာသိပ်မကြာသေးတော့ ဖတ်လို့မကောင်းဘူး ဆိုလည်း သည်းခံပေးကျပါနော် ညီမ လူတယောက်ကိုေ၇းသားချင်းဖြစ်နေလို့ပါ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ။
ဟင်… စနိုးဝှိုက်လေး… ဘာရေးရေးဖတ်လို့ကောင်းဒယ်…. တိုတိုသိပ်ကြိုက်..
ကိုကို ဂန်ဗလာက အကြံမပါပဲ ဂျီးတော့ခ်ချက်ခဲ့တာ စနိုးလေးများ ဖြစ်နေမရားဟင်…
ဘာမှ ချိတ်မပူနဲ့ ရွာထဲမှာ ကိုကိုတို့လို့ ယောက်ျားမယာမရှိတဲ့ လူပျိုဂျီးတွေ
အများကြီးဘဲ… စနိုးလေးရဲ့ နောင်တတွေကို မေ့သွားစေရမယ်…
အချစ်တုအဆိပ်မိနေတဲ့ စနိုးဝိုက်မင်းသမီလေးကို မင်းသားလေး ကိုကိုဂန်ဗလာက…
အကြံမပါပဲ ကာတွန်းထဲက အတိုင်း ဖြေဆေးပါးရမရားဟင်…
ဟုတ်ကဲ့ ရုပ်မမြင်ရသေးပဲနဲ့ ဒီလောက်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ ချီးကျူးပါတယ်
စနိုးလေးရေ ၊ ဖတ်ပြီးတော့ ကိုပေ ခံစားသွားရတယ်ကွယ် ။ ကိုပေ့ ကို များပြောနေသလားလို့ ကို ဖီးလ်ဖြစ်ရပါတယ် ကွယ် ။ ဟီဟိ
ကိုပေရယ် လုံးဝမဖြစ်နိုင်တာကို ဘာလို့စိတ်ကူးယဉ်နေတာလဲ …….
စနိုးရေ အမလည်းခံစားပေးသွားတယ်နော် တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်လေးပဲ အမညီမလေးကိုထားသွား တယ် ………
တော်တော် ဘူးကျတဲ့လူဂျီး …
တဂယ် .. အဲလို သူ့ကွန်မန့်တွေ ဖတ်တိုင်း ဒီမှာ အသံထွက်ပြီး ရီမိတယ် ..
ဘာမှန်းကို သိဘူး ..
ခံစားသွားပါတယ်ညီမလေး။ ရည်ညွန်းသူဖတ်မိရင်တော့ ညီမလေးခံစားချက်ကို နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
မနေ့က ဖော်ဝပ်မေး တစ်ခုက ရလို့ ပါ ၊ သဘောကျတာနဲ့ ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
မန့်တာ မို့ စည်းကမ်းနဲ့ လွတ်မယ်ထင်ပါတယ်နော
Me: နေကောင်းလား စုနန္ဒာ
Su Nanda: ကောင်းပါ၏
Su Nanda: စာဖတ်နေသည်
Me: နာမည်လေးက ချစ်စရာလေးနော် စု ဒါမှ မဟုတ် နန္ဒာ လို့ခေါ်မယ်နော်
Su Nanda: စိတ်ကြိုက်သာခေါ်ပါလေ
Me: နာမည်အပြည့်အစုံ ဘယ်လိုခေါ်လဲဟင်
Su Nanda: ဦးသုနန္ဒာ လင်္ကာရ
Me: OMG, I thought u ragirl, Su Nandar. Sorry..
ဦးတင်ပါတယ် ဘုရား။ ကန်တော့ ကန်တော့…။
အဲတာ အရီးလတ် တင်ပေးလို့ ကြည့်ပြီးပြီ..ဗျ..
နမူနာကြည့်ချင်ရင် အပေါ်က ဒုတိယမြောက်ကွန်းမန့် က နဖူးပြောင်ပြောင်နဲ့အူးပေကိုသာကြည့်
ပြောင်စပ်စပ်(ရုပ်ကော နဖူးကော)၊ ပြီတီတီနဲ့အဲသလိုရုပ်
အမှန်တိုင်းပြောရလျှင် ..အွန်လိုင်း အချစ်ဆိုတာကို အယုံကြည်မရှိပါဘူး … ။ ဒါကို အချစ်လို့လည်း မခေါ်ထိုက်ဘူးလေ …။ ချက်တင်လုပ်နေကြမို့ စွဲလန်းမှုတစ်ခုလို့သာ မြင်မိပါတယ် … ။ စွဲလန်းခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်က စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေကြောင့် အချစ်ဆိုပြီး ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ကြတာပါ … ။
ချက်နေရလို့ … အချစ်လို့ထင်တာ …မချက်ပဲ တစ်လလောက်နေကြည့် … အလိုလိုကို သွေးအေးသွားလိမ့်မယ် … ။အွန်လိုင်းရဲ့နောက်ကွယ်က တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀ထဲ ၀င်ကြည့်မယ်ဆိုလျှင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့လေ … ။ လူခြင်းဆုံမယ် ညှိနှိင်းနားလည်ကြမယ်ဆိုလျှင်တော့ တမျိုးပေါ့လေ … လိုက်ဖ် ပါတနာအဖြစ်နဲ့တော့ ရေရှည်ဆက်သွားလို့ ရမှာပေါ့ … ။
တကယ့်အချစ်က လက်တွေ့ဘ၀မှာ ပိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ပြည့်စုံတယ် ။ ချစ်တာကို .. ဒီအတိုင်းပဲချစ်နေမယ်ဆိုလျှင်တော့ … သိပ်ပြီးအထွေထူး ပြင်ဆင်ဖို့မလိုပေမယ့် .. အချစ်ကြောင့် ပိုင်ဆိုင်လိုစိတ်တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုလျှင်တော့ … ပြင်ဆင်စရာတွေ ၊ ပြုပြင်စရာတွေ လိုလာပြီ .. မဟုတ်လျှင် .. အိမ်ထောင်သည်ဘ၀မှာ အချစ်တွေပျောက်ပြီး .. တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဘောက်စင်ပလေးနေရတာနဲ့ … လောကကြီးက စိတ်ကုန်ဖို့ကောင်းနေလိမ့်မယ် ။
အွန်လိုင်းက ချက်ဖော် ချက်ဖက်ကို တကယ်မရယ်ရွယ်ပဲ ၊ စိတ်အပမ်းဖြေစရာအဖြစ်လည်း သုံးနေကြတာ တွေ့ဖူးတာမို့ ..လွယ်လွယ် မခံစားမိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်နော် … ။
Online Love ကိုအရင်ကအယုံအကြည်မရှိခဲ့ပါဘူး
စာေ၇းသူ ညွှန်းဆိုသည့်ကောင်လေး ဆိုသည်မှာ
ဂျော်နီဒက်နှင့် ခွဲမရအောင်တူသော ယခု ဒါ့ပုံပိုင်ရှင်
ကျနော် မောင်ချာဗက်ဇ် လုံးဝ(လုံးဝ) မဟုတ်ရပါကြောင်း
အွန်လိုင်းဆိုတာ တကယ် အချစ်စစ်မရှိတဲ့နေရာ လို့ ထင်လို့ရပေမယ့်။ များသောအားဖြင့် ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်။ချွင်းချက် တစ်ခုအနေနဲ့။ သူငယ်ချင်းလင်မယားအကြောင်းပြောပြမယ်။ သူတို့တွေ စလုံးနဲ့ ဒီနဲ့ ရည်းစားလုပ်ကြတယ်။ ကောင်လေးက စလုံးမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူပါ။ ကောင်မလေး ကတော့ ရန်ကုန်က Rose တို့သူငယ်ချင်းပေါ့နော်။ သူငယ်ချင်းတွေ ကတော့ မစစ်မမှန်ဘူးထင်လို့ ၀ိုင်းတားကြတယ။် ကောင်လေးက Rose သူငယ်ချင်း ကို အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်ကြပြီး ပြန်လာလက်ထပ်တယ် အခုဆို သမီးလေးတောင် ရနေပါပေါ့တော်။ ဒါကလည်း ဖူးစာပါလို့နေမှာနော်။ ငြင်းလို့မရတဲ့ သဘောပေါ့။
စနိုးရေ အားပေးတာတော့ မဟုတ်ဘူး နော်။ သတိတော့ထားပေါ့။
ဒါပေမယ့် Rose ပြောသလို များဖြစ်လေမလားလို့ စိတ်ကူးမယဉ်ကြနဲ့နော် ရွာသူရွာသား မောင်လေး ညီမလေးတွေ။
တားတားလဲ ဆင်ခြင်ပါ့မယ်….ဒါပေမဲ့ တားတားမှာ အွန်လိုင်းထဲက တွေ့ပီးချစ်ခဲ့ရတဲ့ ဖရဲသီးမဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတော့ ချိပါတယ် သူက ဘဲဥ၊ငုံးဥ ရောင်းတာဆိုပေမဲ့ စိတ်ထားရော ရုပ်ကလေးပါ သနားကမားမို့ တားတားချစ်မပါတယ်….
တူကရော တားတားကို အပြောကြံတာများဖြစ်နေမလား ဟင်င်င်…….
အားပေးသွားပါတယ် စနိူးဝိုက်ရေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချင့်ချိန်ဖို့တော့ လိုမယ်ထင်ရဲ့
ကိုယ့်ခံစားချက် ကိုယ့်ဖြစ်အင်ကို ထုတ်ဖော်ဝံ့ခြင်းဟာလဲ ကောင်းတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တခုပါဘဲဗျာ…
စနိုးရေ အွန်လိုင်းထဲမှာဆိုတော့ သတိတော့ထားပါဦးနော်